Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Duufaanta In-Fa ayaa curyaamisay gobolka Shanghai ee Shiinaha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • News • Parks Theme • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Daraasiin maraakiib ah ayaa laga daadgureeyay deked mashquul badan oo ku taal koonfurta Shanghai.
Duufaanta In-Fa ayaa dhulka dhigtay. Roobab mahiigaan ah ayaa saddex maalmood oo kaliya ku daadiyey roob qiimihiisu ahaa todobaadkii hore gobolka bartamaha ee Henan, waxaana ku dhintay ugu yaraan 58 qof.
Garoomada diyaaradaha ee Shanghai Pudong iyo Shanghai Hongqiao ayaa baajiyay boqolaal duulimaad sababtoo ah waxay ku dhawaadeen taifun In-Fa. Duullimaadyo kale ayaa la filayaa in la baajiyo Isniinta.
Shanghai waxay xirtay jardiinooyin iyo degmada webiga Bund, oo ah goob dalxiis caan ah. Disneyland sidoo kale waa la xiray.
Duufaanta In-Fa ayaa la filayaa inay u jeesato dhanka Japan waxaana laga yaabaa inay saameyn ku yeelato Olombikada socda.
Axaddii saacaddu markay ahayd 12.30 pm Dufaantii In-Fa ayaa ku soo dhacday xeebta Putuo, Zhoushan, ee Bariga Zhejiang ee Gobolka Zhejiang oo xambaarsan dabaylo ilaa 38 mitir ilbiriqsi kasta xarunta, sida laga soo xigtay kormeerka Xarunta Saadaasha Hawada Qaranka.
Ku dhawaad ​​200 oo digniin oo ku saabsan masiibooyinka saadaasha hawada ayaa laga soo saaray bariga Shiinaha ee Shanghai iyo Zhejiang iyo Jiangsu subaxnimadii Axadda. 132 ka mid ah digniinahaan ayaa la soo saaray illaa 8 -da subaxnimo ee Zhejiang oo keliya taas oo ah inay qaado culayska duufaanta.
Dhanka kale, Xarunta Saadaasha Deegaanka ee Badda Qaranka ayaa joogtaynaysa digniinta casaanka ah ee laba -geesoodka ah ee duufaannada iyo hirarka Shanghai subaxnimadii Axadda, iyo digniinta cas ee duufaannada aagga Hangzhou Bay ee Zhejiang.
Roobka ayaa lagu qiyaasay 150 milimitir ilaa 200 milimitir iyada oo meelaha qaar ay gaareen 250 milimitir ilaa 350 milimitir. Roobabka ugu badan ee saacadlaha ah ayaa la filayaa inay gaaraan 40 millimeter ilaa 60 millimeter iyadoo meelaha qaar ay gaarayaan 80 milimitir.
Shalay, Sabti ilaa Khamiista soo socota, qaybaha tareenka ee la filayo inay saamayn ku yeelato Duufaanta In-Fa ee gobolka Delta River ee Yangtze ayaa la hakiyay si loo sugo ammaanka rakaabka, Xinhua ayaa werisay.